Naghachi Lost Ma ọ bụ ehichapụ Data Site An SSD | Data Recovery for SSD
Olee otú Iji Dịghachi Lost Ma ọ bụ ehichapụ Data Site An SSD
Home → Olee otú Iji Dịghachi Lost Ma ọ bụ ehichapụ Data Site An SSD
Agbake furu efu ma ọ bụ ehichapụ data site na SSD (Solid State mbanye) anaghị nwere na-gbagwojuru anya.
Iji jide n'aka na, na RescuePRO® Deluxe maka SSD, mgbake usoro bụ dị mfe dị ka atọ mfe nzọụkwụ.
*Biko rụba ama, RescuePRO® Deluxe maka SSD e mere maka agbake data si mpụga SSD draịva, ọ na-adịghị iji naghachi n'aka usoro draịva.
RescuePRO® Deluxe maka SSD dị na ma a Windows® na a Mac version.
Nweta Windows version ebe a……
Nweta Mac version ebe a….
Olee na-agbake ehichapụ faịlụ site na gị SSD?
Amụma mkpuchi na gị mpụga SSD mbanye na jikọọ na gị na kọmputa.
1. Malite RescuePRO® na-ahọrọ ụdị mgbake usoro ị chọrọ ịrụ – Naghachi site File Content (ụdị) ma ọ bụ Naghachi site Filesystem (undelete).
Naghachi site File Content ga iṅomi gị dum na ngwaọrụ na-agbake data site na faịlụ ụdị ọdịnaya ude ọbụna ma ọ bụrụ filesystem na-efu.
Naghachi site Filesystem bụ ihe undelete ọrụ ma na-achọ a nti filesystem.
Ọ bụghị n'aka na nke mgbake ụdị nwere ike ịdị mkpa ka gị na mgbake?
Egbula kpọtụrụ anyị maka free oru nkwado.
Anyị enyi na enyi na-arụ ọrụ nwere ike na-eje ije gị site na-ahọpụta ndị kwesịrị ekwesị na mgbake gị ọnọdụ.
Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ na-agbake site na File Content, esote na ihuenyo ga-ekwe ka ị họrọ ma Photos, Audio / Video, ma ọ bụ ndị ọzọ Files.
2. Choose your removable media from the list (iji ndabara nhọrọ oge mbụ RescuePRO na-agba ọsọ na-eji mbanye leta na-anọchite anya gị media ma ọ bụ na ngwaọrụ na-ahụ mode ma ọ bụrụ na ọ dịghị mbanye leta e kenyere gị media).
Họrọ Malite na-amalite ịgụ isiokwu usoro.
3. Once the scan completes you will receive a list of recovered files. The faịlụ na-echekwara na draịvụ ike na-akpaghị aka.
Pịa mmepụta nchekwa na-ele faịlụ:
Ọ bụ ya! Gị faịlụ ga-ugbu a viewable na mmepụta folder.
Iji chebe mbanye na-ehichapụ faịlụ, niile natara faịlụ ga-azọpụta ọzọ nchekwa na ngwaọrụ ma ọ bụ ọzọ mbanye leta na usoro. Ekwela ibudata software na mbanye na ị chọrọ iji naghachi.
biko cheta, ma ọ bụrụ na ị chọrọ naghachi faịlụ site na a siri ike mbanye, biko jiri FILERECOVERY® maka ike mbanye mgbake.
Ọ bụrụ na ị na-enweghị ike naghachi na-ahụ data na-ekpe ikpe na nsụgharị, e nwere ọnọdụ ndị ọzọ na anyị nwere ike inyere gị aka na. Anyị nwere ahụmahụ technicians onye nwere ike igosi a anụ ahụ na mgbake na otu nke anyị data mgbake emmepe. Iji kpọtụrụ anyị data mgbake emmepe, dị nnọọ pịa ebe a >>> Data Recovery Centers<<<< Na anyị mgbake ngwaahịa, anyị na-enye na-akparaghị ókè free oru nkwado. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla oru ajụjụ na nsụgharị dị iche iche dị ma ọ bụ nke version bụ ihe kasị mma n'ihi na ị, biko kpọtụrụ anyị